I-Acrylic Times Ihlanganisa Ngobuciko Amaphephandaba kanye ne-RSS | Martech Zone
ULwesihlanu, May 1, 2009 ISonto, Ephreli 24, 2016 Douglas Karr
Umngani wami uBill ungiphendukele MacHeist isikhashana emuva. IMacHeist inkulu kakhulu - bahlanganisa inqwaba yezicelo zeMac ongazithenga ngesaphulelo esikhulu. Uma abantu abanele bethenga futhi kuphakanyiswa imali eyanele yokupha, bayanikela zonke amalayisense okuthenga azo zonke izinhlelo zokusebenza ephaketheni lonke.
Kuyisu lokukhangisa elihlakaniphile ngoba licindezela ababambiqhaza ukuthi bangene egazini, bakhuthaze inqwaba, futhi bafune abanye abantu abazothenga!
IMacHeist 3 isanda kuqeda futhi inezinhlelo zokusebenza ezithile ezinhle kuyo. Umkhankaso ube yimpumelelo futhi zonke izinhlelo zokusebenza bezinamalayisense. Enye yezicelo kwaba Umtfumbu we-Acrylic, uhlelo lokusebenza oluhehayo lokuphatha nokufunda ama-RSS Feeds akho. Konke mayelana nohlelo kuhlukile - akusebenzisi noma yimaphi amapharadesi wokuzula futhi awusebenzisi izindlela zakudala zokukhathala ezijwayelekile. Ngemizuzwana embalwa ukwazile ukuthola… inembile kakhulu.
Tags: izinhlelo zokusebenza ze-acrylic pulp acrylicizikhathi acrylicokuphakelayo umfundimacheist